Ikhaya losapho elihle nelikhethekileyo
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguFelicitas
Ngaba uyafuna ukucima unxibelelwano kwingxolo yesixeko? Ngaba uyafuna ukonwabela impelaveki eyodwa nosapho lwakho? Ngaba uyathanda ukonwabela ikhaya elizolileyo? Ke le ndlu ilungele wena! Yindlu ekude nesiphithiphithi sesixeko, ibanzi kakhulu, ilungele abantu abayi-10, kodwa banokulingana ngakumbi ngeendleko ezongezelelweyo, indlu inamagumbi okulala ama-4, amagumbi okuhlambela ayi-3 agcweleyo, ikhitshi, igumbi lokutyela, ipatio yenkonzo kunye igadi entle. Eyona ndawo yokuphumla!
Indlu ikwindawo ezolileyo kwaye ikhuselekile kakhulu, kwilizwe kunye nendawo ekhululekile, kwilizwe leshizi kunye ne-quesillo, eyona nto ilungileyo ye-Oaxacan cuisine, unokubona iifama kunye neendawo apho benza khona i-tortilla kwi-comal. Indawo ekhethekileyo nengenakuthelekiswa nanto!
4.67 ·Izimvo eziyi-29
4.67 out of 5 stars from 29 reviews
4.67 · Izimvo eziyi-29
I-Santiago Etla yindawo ezolile kwaye ikhuselekile kakhulu, igcina isimbo esihle kunye nelizwe, abantu banobuhlobo kakhulu, awuyi kufumana iindawo zokuthenga ezinkulu okanye iindawo zokutyela edolophini, kodwa isixeko sisondele kakhulu, imizuzu eyi-15 ngemoto; kunjalo, uyakwazi ukufumana iindawo engakholelekiyo ukutyelela kufutshane le dolophu intle encinane
Umbuki zindwendwe ngu- Felicitas
Ndiyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso onokuthi uzifune ngexesha lokuhlala kwakho, ndiyathanda ukunika iindwendwe zam zabucala ukuze zonwabele indawo yokuhlala kunye nokuhlala kwazo, kodwa ndihlala ndijonge iminxeba okanye imiyalezo yabo.
Ndiyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso onokuthi uzifune ngexesha lokuhlala kwakho, ndiyathanda ukunika iindwendwe zam zabucala ukuze zonwabele indawo yokuhlala kun…